Dhamsa Jabduu – Site Title
Posted byabdiaminbakar 5th Aug 2021 Posted inUncategorized
#Jabaa_keenya_bira_haa dhaabbannu !
“Mootummaan Itoophiyaa yeroo jalqabaatiif imaammata biyya alaa dantaa fi birmadummaa biyyakoo miidhu hin fudhadhu jedhee mootummoota America dura dhaabbate Dr Abiyyi qofaadha”Pirisdent MNO #obboo_Shimallis_Abdiisaa
Gargaarsa keessaniif jedhee imaammata ergamtummaan biyya koo jiraachisu,kan akka feetanitti dhimma keenya keessa seentanii akka borcitan eyyamuurra morma kiyyan kenna jedhee kutannoodhaan namni oftuultota lixaa(America) ofirraa qolate ilma Oromoo Dr Abiyyi qofaadh.
Faranjiif ergamurraa faranjii ergachuu barachuu qabna.
Saba koof falmee du’een taddasaa birruu ta,a
jijjiiramni laaftuutti hin dhufnee jijjiiramaan hin taphatinaa yaa BAANDAA. Injifannoo harkaa qabnu tana argachuuf gootoota meeqa itti dhabne!
Kanaan Oromoon hunduu boonuu qaba.
Tarii dantaa siyaasaa dhuunfaa keenyaaf jennee har’a dhugaa kana dhoksuu dandeenya ta’a.
Boru garuu seenaa irraa haquu hin dandeenyu.
Hedduun keenya iccitii warri dhihaa mootummaa Dr Abiyyi irratti dhaadatanii fi dhimma Itoophiyaa irratti odeeffannoo dharaa balballoomsaa jiran nuuf galuu dhiisuun,akka nuti baandota juntaa cina hiriirree Dr Abiyyitti duullu godheera ta’a.
Kanneen utuu beekanii akka waan inni dippiloomaasii dadhabaa qabuutti diina wajjin ololaa turanis hedduudha.
Dhugaan jiru garuu akka mootummoota darbanii doolaaraan na gowwoomsuun akka ashaangulliitii na ergachuu hin dandeessan, imaammata ergamtummaa keessan hin fudhadhu jedhee waan dura dhaabbateef akka ta’e amma ragaa hedduun bahaa jira.
Kana ammoo seenaan guyyaa tokko waan nuti hin beekne hedduu itti dabalee ifoomsuuf jira. Hangasitti ilma keenya cina hiriirra!!
Carraan Itiyoophiyaa Badhaatuu Fakkeenya Afrikaa Taate Arguu Harka Keenya Jira!
Itiyoophiyaan tan hedduminaan miidhagde, eenyummaa gara garaatiin tan bareedde, lafti ishii kennaa adda addaatiin kan guuttame, ummanni ishee bilisummaan kan jiraate, biyya saboota hedduuti. Itiyoophiyaanonni injifannoo addunyaa fulduratti ittiin dhaadachuu danda’an kan qaban, ummata qarooma durii qabuu dha.
Lammiileen ishee jaalala biyyaa guddaa fi wareegama guddaa bara baraan kafaluun biyyaa guddoo kana nu harkaan gahaniiru. Adeemsa dadhabsiisaa fi qormaataan guutame hedduu abdii osoo hin muranne moo’atanii, biyya teenya kabaja ishii guutuu waliin kanneen nuuf tursiisaniif galanni haa ta’u jechaa, hardhas seenaa ajaa’ibaa rawwachuu kan nu dandeessisu, carraan guddaan fuulduraa keenya jira.
Wanta faranjiin jettu raawwachuuf dirqama hin qabnu. Fedhii franjii raawwachuuf gugguufurra, fedhii keenya faranjiin akka raawwattu hojjachutu nurraa eeggama.
Yeroon isaa immoo amma. Xiinsammuu kana baatu fi gochuu danda’u hundi keenya horachuun kabaja fi jaalala biyya keenyaf qabnu miidiyaa hawaasaa kanarratti agarsiisuu qabna.
Akkuma Ilmi nama somba isa malee socho’uu hin dandeenye,Ilmi nama kammiiyyuu iddoo jireenya isaa irraa iddoo barbadeetti socho’uuf Ifni haalaan barbaachisaadha.
Biyyi Ethiopia tunis Badhaadhina malees socho’uu hin danda’u.
Badhaadhinni jaalalaa cimsa, Badhaadhinni Nageenya, Badhaadhini kabaja,Badhadhini dingdee nama dhunfa hamma biyyaattii jiru cimsa, Kanaafuu bakka badhaadhini hin jirrettii wanti kammiiyyuu hin milkaa’u.
Badhaadhini ifa kan jedhamuu keessoowwaan ifaattii caljedhamee osoo hin tanee haadawwaan qaqqal’aa baayeetu walitti dhufe,haadni kun immoo akkaata tartiiba isa eegatee kan caasseeffamedha.
Caaseeffamni kun immoo gubbaa irra gadittii (top to down) kallattii kamminuu uummata keessa faca’ee ifa kan nuf laatudha.
IFA kana immoo keenya ta’u beeknee itti fayyadamuu qabna.
Kaayyoon Ampuuliis IFA qofa osoo hin tanee tokkummaa(Unity) keenya keessaattis gahee olaanaa taphata.
Baadhaadhini biyyaa keenya keessa gad bu’udhaan uummata keenyaaf lafee dugda ta’ee kan tajaajiluu fi kan tajaajila jiruudha.
#Hubachiisa: Dabalata Odeeffannoo Qulqulluu, Biyya keessa fi Biyya Alaas ni argattuu, Barnoota Midiyaa Hawasaa adda adda argachuufis;
Yuutyuubii keenya Subscribe nufgodhaa https://youtube.com/c/abdiaminbakar
Twiitara Keenya:https://twitter.com/AbdiAminBaker?s=09 &nbsp;
Guruphii keenya Join godhaa: https://www.facebook.com/groups/abdiaminbakarcnn/?ref=share
Nu duukaa bu’aa nu hordofaa.
Addee Sara Hassen Adem